Amazon Kindle Paperwhite 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သေး sharpest နှင့်အကောင်းဆုံး - သတင်း Rule
အသစ် Kindle Paperwhite သေး Amazon ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏အလင်း, ကိုင်ဖို့လွယ်ကူနှင့်အသုံးပြုမှု, မျက်နှာပြင်ငါသိမြင်ပြီ crispest က e-စက္ကူမျက်နှာပြင်တွေကိုတဦးတည်းအနေဖြင့်. ဒါဟာအပျော်အပါးစာဖတ်ခြင်းကိုငါပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းထက်ပိုရှည်သည်အဖတ်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Amazon Kindle Paperwhite 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သေး sharpest နှင့်အကောင်းဆုံး” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့တွင် 23 ဇွန်လများအတွက် 2015 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Amazon ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Kindle Paperwhite ဟာသူ့ရဲ့တစ်ဦး updated version ဖြစ်နေ, ယခုတစ် crisper နဲ့ pixels ကို၏နှစ်ကြိမ်အရေအတွက်နှင့်အတူဖန်သားပြင်ဖတ်ရှုဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ.
အဆိုပါ Paperwhite အအလယ်အလတ် Kindle ဖြစ်ပါသည်, ထိပ်-of-the-line ကိုအောကျတှငျ £ 170 Voyages သောခေါင်းလောင်းနှင့်ပီပီကတိပေးထား, နှင့်£ 50 ဦးအခြေခံပညာ Kindle အထက်. သို့သော်အမေဇုံသူ့ရဲ့ flagship အဖြစ်အသစ် Paperwhite တူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က e-စက္ကူမျက်နှာပြင်ပေးခြင်းအားဖြင့် Voyages ရဲ့အားသာချက်သို့စား?
ရိုးရှင်းသော monochromatic ဒီဇိုင်း
အဆိုပါနောက်ခံအလင်း e-စက္ကူမျက်နှာပြင်အဖြူကြည့်ရှုကိုတဆင့်ချိန်ကိုက်သည် 24 အဆင့်ဆင့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ပြင်ပကနေပြောင်းလဲသွားမယ့်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ခက်ခဲင်. ဒါဟာတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်-အာရုံစူးစိုက်ဒီဇိုင်းင်. နောက်ကျော soft-touch နဲ့ပလပ်စတစ်ထဲမှာဖုံးလွှမ်း, ရှေ့ bezel ယခင်မျိုးဆက်ထက်ပိုခက်ခဲအနည်းငယ်ပိုပြီးမီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါသည်.
အဘယ်သူမျှမခလုတ်ခွဲအောက်ခြေအစွန်းပေါ်မှာပါဝါခလုတ်ကနေရှိပါသည် - တ touchscreen ကကြွင်းသောအရာ၏စောင့်ရှောက်မှုကြာ. စာမကျြနှာကိုဖွင့်ဖို့လက်ျာလက်ဘက်ခြမ်းကိုပွတ်ဆွဲပါသို့မဟုတ်မထိ, နောက်ကျောသွားကြဖို့လက်ဝဲ. မီနူးနဲ့ပြောင်းလဲမှု setting များကိုမြွက်မှထိပ်ထိ, အနောက်ခံအလင်းညှိဒါမှမဟုတ်အသစ်စာအုပ်ကို select လုပ်ပါ.
သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်ဦးက Kindle သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် e-reader ကိုအသုံးပြုကြလျှင်ချက်ချင်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
အဆိုပါ 6in မျက်နှာပြင်အာရုံဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာနှစ်ကြိမ် pixels အရေအတွက်နဲ့တစ်ဦးမျက်နှာပြင်သိပ်သည်းဆရှိပါတယ် 88 လက်မနှုန်းကပို pixels ကို (PPI) 300PPI မှာယခင်မျိုးဆက် Paperwhite ထက်, စာသားကိုဖတ်ပြတဲ့အခါသိသာသောဖြစ်ပါသည်. နှိုင်းယှဉ်£ 49 ကုန်ကျဈေးအပေါဆုံးက Kindle 167PPI နှင့်အတူတစ် 6in မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်, သိသာလျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရာဖြစ်ပါသည်.
Related: The Guardian ကနှင့် Observer Kindle အပေါ်ယခုရရှိနိုင်ပါ
ရှေ့အလင်းစာမျက်နှာအဖြူပေါ်လာစေသည်, ၎င်း၏အမည်ကိုမှလာဘယ်မှာရာဖြစ်ပါသည်, ကိုယ်တိုင်အလွန်မှောင်မိုက်၌ဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အမှိန်ဖို့အရမ်းအလွန်တောက်ပတဲ့မှချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါနောက်ခံအလင်းကိုတောင်စာမကျြနှာကိုဖြတ်ပြီးသည်, ဒါပေမဲ့စာမျက်နှာ၏အလွန်အောက်ခြေမှာအနည်းငယ် grayer ကြည့်.
ဒါဟာအစဉ်အဆက်အ Paperwhite မှတပ်ဆင်တာအကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်သည်, ထိုသို့စျေးအကြီးဆုံး Kindle ကိုက်ညီစဉ်, အ£ 170 Voyages, pixel အရေအတွက်အပေါ်ကအတော်လေးအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်မဟုတ်.
Screen ကို: 6E-စာတမ်းတွင် (300ppi)
ဒိုင်မန်းရှင်း: 169 x က 117 x က 9.1 မီလီမီတာ
အလေးချိန်: 205ဂရမ် (3က G version ကို 217g)
connectivity ကို: ဝိုင်ဖိုင် (3optional ကိုက G)
သိုလှောင်ခြင်း: 4GB ကို
ဘက်ထရီသက်တမ်း: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အဘို့အ rated 21 စာဖတ်ခြင်း၏နာရီ
နယူးစာလုံးတွေနဲ့ features တွေ
အဆိုပါ Bookerly font ကို On-screen ကိုဖတ်ရှုဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အမေဇုံ Bookerly ဟုခေါ်တွင်သည်၎င်း၏ Kindle များအတွက်အသစ်တစ်ခုကို font ကိုရှိပါတယ်, အစားအပုံနှိပ်စာမျက်နှာထက် screen ပေါ်မှာဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော, နှင့်အသစ်လုပ်ခြင်း, စာစီ features တွေ. သူတို့ဒီလို Helvetica အဖြစ်ဂန္သုံးပြီးထက်ပိုမိုလွယ်ကူ screen ပေါ်မှာစာဖတ်ခြင်းလုပ်ပေါင်းလိုက်သော. ငါမျက်စိ-strain ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့တွေ့ရှိရ, ပင်ရှည်လျားစာဖတ်ခြင်းအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း - ငါ့ကိုစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာ screen ပေါ်မှာဖတ်ရှုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏.
Amazon ရဲ့ X-ray, notation, စကားလုံးကြည့်ရှု-up ကနှင့်တိုးတက်မှုညွှန်းကိန်း, ကမျြးအခနျးကွီးပွီးဖို့သင်ယူလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကြာကြာပြောတတ်သော, လူအပေါင်းတို့သည်စာဖတ်ခြင်းအတှေ့အကွုံမှတန်ဖိုးနှင့်အကျိုးစီးပွား add.
တစ်ဦးစကားလုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်အမည်ပေါ်တွင်တစ်ဦးကိုလက်ညှိုး Hold နှင့်တစ်ဦးစကားစပ်ထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များ box ကိုပေါ်လာ, အတိုကောက်ဝေါဟာရများများအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောအရာဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအကွောငျးကိုမေ့လျော့င်အတိုကောက်သို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်.
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကြာရှည်ခံသည် 21 နာရီ
တစ်ဦးဇာတ်ကောင်ကိုမေ့လျော့? X-ray feature ကိုအဘယ်သူသည်အဘယ်သူခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ကလွယ်ကူစေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
မျိုးဆက်ဟောင်းများထက် interface ကိုသွားလာစဉ်အသစ် Paperwhite လည်းအနည်းငယ်ပိုမြန်ပြီးပိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပရီမီယံတက်ဘလက်အပြိုင်မပါဘူး, ဒါပေမယ့် e-reader ကိုများအတွက် snappy ခံစား.
အဆိုပါ Paperwhite 205g အလေးချိန်, အထူ 9.1 အထူသည်နှင့်တယောက်ကိုလက်တော်၌ကျင်းပရန်လွယ်ကူသည်. touchscreen ကအတူတစ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်နှစ်ဦးတို့လက်ဖြင့်လွယ်ကူသည်, ညာဘက်ခလုတ် - တဒါလျော့နည်း- နှင့်စာမျက်နှာအပြောင်းအဘို့အလက်ဝဲလက်အနားကောင်းတဲ့လိမ့်မည်.
အမေဇုံကို Paperwhite စာဖတ်ခြင်းအထိကိုခြောက်ပတ်ကြာဆို 30 မိနစ်တစ်ရက် (21 စုစုပေါင်းနာ​​ရီ) အရောင်သတ်မှတ်ထားနှင့်အတူ 10 ထဲက 24 အဆင့်ဆင့်. ဒါကတူညီတဲ့ settings နှင့်အတူယခင် Paperwhite ထက်နှစ်ပတ်လျော့နည်းင်, ဒါပေမယ့်အလွယ်တကူရှည်လျားလုံလောက်စာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုပြီးမြောက်ရန်.
ငါ Paperwhite အားသွင်းဖို့လိုအပ်နေရှေ့မှာလေယာဉ်ပျံ mode ကိုနှင့်အတူနှစ်ဦး 400 စာမျက်နှာစာအုပ်တွေပြီးအောင်မှစီမံခန့်ခွဲ. ပိုမိုလျင်မြန်စွာညှစ်ဘက်ထရီအပေါ် Wi-Fi နှင့် 3G ဆက်သွယ်မှုထွက်ခွာ.
အဆိုပါအနက်ရောင်ပျော့ပျောင်း-touch နဲ့ပြန်ချုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူသော်လည်းမြေမှုန့်ကိုယူလိုက်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Kindle Paperwhite 2015 အထူးကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူက Wi-Fi ကိုသာဗားရှင်း£ 109,99 မှာယခင်မျိုးဆက်ကဲ့သို့တူညီသောကုန်ကျ, သောစာအုပ်များနှင့်အခြား bits သည်များအတွက် lockscreen မှပေါ်ကြော်ငြာတတ်၏.
3G နှင့်အတူတစ်ဦးကဗားရှင်း£ 169,99 ကုန်ကျလည်းရရှိနိုင်ပါသည်, ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှား£ 10 ကုန်ကျစဉ်. ဒါဟာလက်ရှိကြိုတင်မှာယူမှုအပေါ်တင်ပို့များအတွက်ရရှိနိုင် 30 ဇွန်လ.
ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က၏ Kindle Paperwhite သို့မဟုတ်ကျော်ဧရာမခုန်မယ့် ပထမဦးဆုံးတစျခု, ဒါပေမဲ့အမေဇုံရဲ့ Kindle အခြေခံပညာကျော်သိသိသာသာတိုးတက်မှုသည်နှင့်ငြင်းခုံဖွယ်အရှိဆုံးအခြားအလားတူစျေးနှုန်းပြိုင်ဘက်ထက် သာ. ကောင်း၏.
ဒါဟာအစ Voyages အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏, ဆဲ e-reader ကိုငါ့အကြိုက်ဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လျော့နည်းစျေးကြီး£ 60 ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ Paperwhite ကျယ်ပြန်စာအုပ်စာဖတ်သူကိုသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးသည်အထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, Amazon ရဲ့ကြီးမားတဲ့စာကြည့်တိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ချင်ပါတယ်နှင့်ထဲသို့သော့ခတ်ခံရစိတ်ထဲမထားဘူး, ဒါပေမဲ့ single-အသုံးပြုမှုစက်ပစ္စည်းအတွက်အများကြီးပိုထက်£ 100 ကိုပေးဆောင်အစာအိမ်မနိုင်. ကရညျရှယျအဘို့, ဒါကြောင့်မြတ်သောဖြစ်ပါသည်.
အကောင်းအဆိုး: အလွန်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်, အသုံးပြုရလွယ်ကူ, ကြည့်ရှု-up ကနဲ့ X-Ray features တွေကိုအကြီးအများမှာ, ပင်နောက်ခံအလင်း, accessories များကြီးမားသောအကွာအဝေး, ကျယ်ပြန့်စာအုပ်စတိုးဆိုင်
Cons: single-အသုံးပြုမှုစက်ပစ္စည်းအတွက်အတော်လေးစျေးကြီး, အနောက်ခံအလင်းမရှိအလိုအလျှောက်ချိန်ညှိ, အဘယ်သူမျှမစာမကျြနှာအလှည့်ခလုတ်
စကားလုံးမြား, အတိုကောက်, အတိုကောက်နှင့်အောက်ခြေအားလုံးရုံအက္ခရာများကျော်တစ်ဦးလက်ညှိုးကိုကိုင်ထားသဖြင့်ဝင်ရောက်နေကြပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
• Amazon Kindle Voyages ပြန်လည်သုံးသပ်: စျေးကြီးပေမယ့်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး e-reader
• Kindle Paperwhite ပြန်လည်သုံးသပ်: Front-lit မျက်နှာပြင်အပျော်အပါးကိုဖတ်ရှုစေသည်
• Tesco အ Hudl2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ငွေတက်ဘလက်တွေအများကြီး
• Apple က iPad mini ကို3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အတူတူတစ်ဦးထိတွေ့ပိုပြီး
• Samsung ၏ Galaxy Tab S ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: အိုင်ပက်များအတွက်ပြိုင်ဘက်?
Amazon.com, အပိုဒ်, E-စာဖတ်သူတွေ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Kindle, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ
← ရ Nokia ကြီး 3210 အားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးဖုန်း? ပါကင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးများကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, လေ့လာမှုပြပွဲ →